CHD Malaysia na ndị mmekọ na -akwado webinar COVID -19 - Global ARCH
CHD Malaysia na ndị mmekọ nwere nnabata webụsaịtị COVID-19
Global ARCH / CHD Malaysia na ndị mmekọ nwere nnabata webụsaịtị COVID-19
Onye nchoputa CHD Malaysia na Global ARCH onye isi oche Grace Jerald, na mmekorita ya na Children's HeartLink na The Malaysian Pediatric Cardiac Society (MPCS), nwere nke izizi nke webinars mmụta anọ na ọrịa. Ndekọ a dị ugbu a na YouTube site na ịpị EBE A.
Shelagh Ross bụ onye nchoputa na onye isi oche gara aga nke Canadian Congenital Heart Alliance (CCHA), nke anaghị akwụ ụgwọ na-akwado ma na-akwado ndị Canada nwere ọrịa obi obi (CHD). Na 2017 o nyeere aka ịmalite Global ARCH, ma na-eje ozi na Board. Ọ bụ onye CHD nwere tetralogy nke Fallot, ma nwee ọtụtụ ịwa ahụ na mmemme. Kemgbe 2004, ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi na-akwado na obodo CHD.